एसएसपीबाट कुटिएका पत्रकार यसो भन्छन्, दलालसँग नाम मिल्दा ८६ बर्षीय वृद्धको सम्पत्ती रोक्का ! (भिडियोसहित) – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / एसएसपीबाट कुटिएका पत्रकार यसो भन्छन्, दलालसँग नाम मिल्दा ८६ बर्षीय वृद्धको सम्पत्ती रोक्का ! (भिडियोसहित)
एसएसपीबाट कुटिएका पत्रकार यसो भन्छन्, दलालसँग नाम मिल्दा ८६ बर्षीय वृद्धको सम्पत्ती रोक्का ! (भिडियोसहित)
Anurag Post May 3, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तर्वार्ता, प्रवासी, भिडियो, राजनीति, व्यापार, स्वास्थ्य Leaveacomment 570 Views
एसएसपी दिबेश लोहनीले सञ्चारकर्मीमाथि गरे हातपात, प्रहरीको छबि धमिलिँदै
काठमाडौं । यतिखेर देशमा साढे ३३ किलो सुन प्रकरणले बजार तताएको छ । साढे ३३ किलो सुन प्रकरण र सनम शाक्यको हत्या काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुलाई जिल्ला अदालत मोरङमा बयान लिन सुरु गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत सो काण्डमा ६३ जना विरुद्ध सुन चोरी पैठारी निकासी, कर्तव्य ज्यान, अपहरण र संगठित अपराध अन्तर्गत संलग्नताका आधारमा बुधबार छुट्टा छुट्टै मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
पहिलो पटक अत्याधिक संख्यामा बहालवाला उच्च प्रहरी अधिकृतहरु विरुद्ध दर्ता गराइएको मुद्दामा पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक बाहेक ८ जना बहालवाला प्रहरीहरु रहेका छन् ।
यसैबिच यसै सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिवेश लोहनीले सञ्चारकर्मीमाथि लात्ता प्रहार गरेका छन् । मोरङ जिल्ला अदालत परिसरबाट निस्किने क्रममा लोहनीले सञ्चारकर्मीहरुलाई हातपात गरेका हुन् । उनले पत्रकार ध्रुव भट्टराई र सुमन सुस्केरामाथि हातपात गरेका हुन् । अभियुक्तहरुको तस्वीर लिन खोज्दा लोहनी पत्रकार माथि जाईलागेका हुन् ।
प्रहरीको उच्च ओहोदामा पुगेका लोहनीले यसरी पत्रकारलाई लात्ताले हानेपछि उनको सर्वत्र आलोचना भएको छ । उनले लत्तीले हानेको भिडियो जसरी भाईरल बन्यो त्यसरीनै प्रहरीको छबी धमिलिएको छ ।
लोहनमाथि सुन काण्डका नाईके गोरे भनेर चिनिने चुडामणि उप्रेतीको समुहले सनम शाक्यको हत्या गरेपछि शव लुकाउन सहयोग गरेको आरोप छ । यो सुन प्रकरणले नेपालको अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल कति सुरक्षित छ छर्लङ्ग पारेको छ ।
बिमानको ट्वाईलमा सुन लुकाउने, बिमानमा यात्रुहरु ओर्लनको लागि लगिने भ¥याङ प्रयोग हुनु, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुनै सुन तस्करीमा संलग्न हुनुले बिमानस्थल सुरक्षालाई ठाडो चुनौती दिएको छ ।
बैदेशिक रोजगार विभाग नै पीडितका पक्षमा छैन
काठमाडौं । देशमा रोनजगारी नपाएपछि धेरै नेपाली युवाहरु विदेश जान बाध्य छन् । तर यही विदेश जाने चक्करमा धेरै युवाहरु ठगिएका छन्, धेरै घरबार विहिन भएका छन् ।
घरैको उठिवास लागेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरुलाई न्याय दिन सरकारको बैदेशिक रोजगार विभाग र न्यायाधिकरण छ । बिडम्वना यहाँका कर्मचारीनै नै दलाल र मेनपावरसंग मिली पीडितलाई झन् पीडित बनाउछन् ।
धैरै पीडितहरु यसरी बैदेशिक रोजगार विभागके केही पनि नगरेको भन्ने गुनासा बढेपछि बुधवार हाम्रो टिम बानेश्वर बुद्धनगरमा रहेको बैदेशिक रोजगार बिभाग पुग्यौँ । करीब १ घण्टाको अवधिमा वैदेशीक रोजगार विभागबाट समयमा समस्या समाधान भन्दा बढी दुख पाएका नेपालीहरु भेटीए ।
केही प्रतिनिधी घटना यस्ता थिए । सप्तरीका धर्मदेव दास, उनका छोरा कृष्णकुमार दाससहित ५ जनालाई ३ महिना अघि गाँउको जग्गा बेचेर जनही १ लाख २० हजार दिएर अस्मीता मेनवारमार्फत साउदी अरेबिया पुगे ।
नेपालबाट भनेको काम दाम तथा सेवा सुविधा केही नपाएपछि उनिहरु नेपाल फर्किन खोजीरहेका छन् तर अस्मीता मेनपावरले फर्किने भए ५ लाख चाहिन्छ भने पछि धर्मदेब दाससहित सबै पीडितका आफ्न्त डेढ महिना अघि वैदेशीक रोजगार विभाग पुगेका थिए ।
विभागले केही दिन त मेनपावरको खाता रोक्का राखिदियो तर उनीहरुका छोरालाई नेपाल भने ल्याएन । ६ पटक विभाग धाउँदा धाउँदा १ लाख बढी खर्च भैसक्यो तर समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । अहिले त उनिहरुलाईं साउदी अरेवियाको जंगलमा लगेर अलपत्र अवस्थामा छोडेको छ ।
हामीलाई भेटीरहँदा साउदी अरेवियाबाट धर्मदेवलाई उनका छोरा कृष्णकुमारले फोन गरेर छिटो उद्धार गर भन्दै थिए । तर बिडम्वना उद्धार गर्नुपर्नेहरुलाई वास्ता छैन धर्म देव छोराको उद्धार गरुन त कसरी ।
मंगलबार विभागका महानिर्देशकले नै उनिहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । तर उनिहरुले दिउँसो भरी कुर्दा पनि महानिर्देशकलाईं भेट्न पाएन् ।
यस्तै रौतहटका जयकिशोर यादव पनि साउदी अरेविया अलपत्र आना भाइहरुको उद्धार गर्दिन भन्दै वैदेशीक रोजगार विभागका पुगेको ४ महिना बितिसके छ ।
१ बर्ष अघि लिङकस्टार मेनपावरबाट साउदी पुगेको रौतहटका कृष्णनन्द राय यादव, शिंगासन गिरी, विनोद शाह, गगन शाहले भनेको काम नपाएको, गरेको कामसमेत तलब सुविधा नपाएको तथा खाना बस्नै समस्या भएपछि उनि विभाग पुगेको थिए ।
उनलाई विभागका निर्देशक शशीकुमार लम्सालले बुधबार बोलाएका थिए । तर बुधबार दिउँसो भर कुर्दा पनि उनले निर्देशकलाई भेट्न पाएनन् ।
अर्को अचम्म लाग्दो घटना पनि भेटियो यहाँ । झापाका दुर्गा निरौला नाम गरेका व्यक्तिले वैदेशीक रोजगारीको नाममा ठगी गरेको रहेछन् । तर विभागले २०६९ सालमा झापाका अर्का दुर्गा निरौलाको जग्गा रोक्का राखिदिए छ । ठगी गर्ने दुर्गा तिवारी को हुन भन्ने कुरा विभागलाई नै थाहा छैन तर घर सम्पत्ती रोक्का राखिएका दुर्गा तिवारी भने उनी हुन् । उनलाई मेनपावर भनेको के हो भन्ने समेत थाहा छैन ।
उनका परीवारले बैंकबाट ऋण लिन खोज्दा मात्रै आफ्नो जग्गा वैदेशीक रोजगार विभागले रोक्का राखिदिएका थाहा पाएका थिए । त्यस पछिका ४ बर्ष आफुुहरु मेनपावर सँग सम्बन्धनै नरहेका व्यक्ति भएको प्रमाण पेश गर्दै वैदेशीक रोजगार विभाग धाउँदै बिते ।
हुँदा हँुदा विभागले अहिले वास्तविक ठग दुर्गा निरौलाको विवरणनै हराएको भन्न थालेको छ । जग्गा फुकुवा गर्ने कुरै गर्दैनन् ।
वैदेशिक रोजगार विभाग पीडित सर्वसाधराण को होइन मेनपावर सञ्चालकहरुको हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ । यसका उदाहरण बनेका छन् धनुषाका दिपेन्द्र कुमार शाहा, एमबिके ओभरसीसबाट १ लाख ५० हजार खर्चिएर कतार पुगेका उनि भनेको काम, दाम र सुविधा नपाएपछि एक महिनामा नै नेपाल फर्किए र क्षतीपुर्तीको माग गर्दै विभाग पुगे ।
तर विभागले २० दिन झुलाएर अहिले मेनपावरले भने बमोजीम नै ३० हजार रुपैया लिएर चुपचाप सम्झौता गर्न लगाइरहेको छ ।
१ घण्टाको अवधीमा भेटिएका उनिहरुको मुहारमा वैदेशीक रोजगार विभागबाट न्याय पाइन्छ भन्ने आशा नै हराइसकेको थियो । सेवाग्राहीलाई बोलाएर मन्त्रालयमा मिटिङ भन्दै हराएका कर्मचारी साँझ सम्म देखिएनन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले शुरु गरे आन्दोलन, लामो दुरीका बसहरु बन्द
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले आज देशभर चल्ने लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन् । सिण्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णयका विरुद्ध यस अघि नै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको राष्ट्रिय यातायात व्यवासायी महासंघ आबद्ध व्यवसायीहरूले लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधन ठप्प पारेका हुन् ।
सार्वजनिक यातायात चलाउन बनाईएका समिति खारेज गर्ने, कम्पनीमा जानुपर्ने लगायतका सिण्डिकेट तोड्ने सरकारी नियमका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसयीहरूले आज लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधन बन्द गरेका हुन् ।
आज देशभर समितिमार्फत चल्ने गाडीका काउन्टरहरू बन्द भएका छन् । लामो दुरीका बसहरु नचलेपछि सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेका छन् ।
सरकारले ग्यारेजमा थन्क्याउने गाडीको रुट पर्मिट खारेज गरिदिने चेतावनी दिँदा पनि यातायात व्यवसायीहरुले आफ्ना सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याएका छन् । सरकारले यस अघि नै समिति खारेज गरेर सम्पुर्ण सवारीसाधन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्नु पर्न भन्दै समिति नविकरण गर्न बन्द गरिसकेको छ ।
Previous यातायात सेवा रोक्नासाथ रुट परमिट खारेज गर्ने सरकारकाे सन्देश,आन्दोलन गरेपनि सेवा बन्द नहुने
Next आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ वैशाख २१ गते शुक्रबार
बडादशैँको अन्तिम दिन यो दिनलाई कोजाग्रत पूर्णिमा वा शरद पूर्णिमा पनि भन्ने गरिन्छ । दशैंको …